Articles tagged 'graca machel'
Opposition pins hopes on Elders 19 July 2018 HARARE - The opposition political parties that have been feuding with the Zimbabwe Electoral Commission (Zec) are pinning their hopes on the visiting Elders group to help them make headway on a number of demands they want met before elections are held at the end of the month. Zimbabwe holds wa...
The Elders to visit Zim ahead of polls 17 July 2018 HARARE - The group of prominent people known as The Elders — who use their collective experience and influence to try and achieve peace and justice around the world — will visit the country this week. While in the country, they will meet with the leaders of political parties, the Zimbabwe Elec...
The Elders push for free, fair Zim polls 21 April 2018 HARARE - Former UN secretary-general Kofi Annan, former US President Jimmy Carter and other prominent figures have encouraged all political actors in Zimbabwe to deliver integrity and transparency across the country's transition, including a level playing field ahead of the upcoming elections. ...
Sadc urged to intervene in Zim 25 August 2016 HARARE - Sadc must intervene in the escalating Zimbabwean crisis and facilitate a smooth transition of power in the country, a group of international elders — Graca Machel, Kofi Annan and Desmond Tutu — have urged. The elders said “Zimbabwe is on the verge of an important transition which, if ...
Graca Machel launches businesswomen network in Zim 28 March 2015 HARARE - Late South Africa's first black President Nelson Mandela's widow Graca Machel was in Zimbabwe last week to launch the Network of African Business Women (NABW). She said Zimbabwean women must participate in the economic development of the country by embarking in sustainable business ve...